नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भैसक्दा पनि खै त विद्यार्थीका हातमा पुस्तक ? | Khabar Express Tv
नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भैसक्दा पनि खै त विद्यार्थीका हातमा पुस्तक ?
खबर एक्सप्रेस २०७९-०३-०९ ०७:३८ मा प्रकाशित Total Shares: 30
काठमाडौं - अब त कडा रूपमा सोध्नैपर्ने भएको छ, ‘खै त पाठ्यपुस्तक ?’ हाल, कक्षा ६ को अंग्रेजी, सामाजिक र नेपाली र कक्षा ८ को पुस्तक अभाव छ ।
प्रत्येक वर्ष यही समस्या– पाठ्यपुस्तक अभाव । सरकारी ढिलासुस्ती यतिसम्म बढेको छ कि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन बितिसक्दासमेत विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक हुन्न ।
किन पुगेन पाठ्यपुस्तक ?
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्य ‘रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागज समयमै आउन नसकेको’ औंल्याउँदै ‘स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाईका कारण पाठ्यपुस्तक ढिलाई भएको’ प्रस्टोक्ति दिन्छन् ।
केन्द्रका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धका कारण ‘सप्लायर्सले समयमै कागज ल्याउन नसकेको र मतपत्र छपाईलाई प्राथमिकता दिनुपर्दा पाठ्यपुस्तकको काम नसकिएको’ हो । हुन त, विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या चालू आर्थिक वर्षमात्र हैन, विगतबाटै यस्ता समस्या दोहोरिरहेका छन् । सरकारले भने विभिन्न बहानामा पन्छिने गर्छ ।
जनताको चाहनाअनुसार विकास गर्नुपर्छ :ऊर्जामन्त्री भुसाल
मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयविरूद्ध उत्रिएका नेकपा एसका ६ जना सांसदले लिए हस्ताक्षर फिर्ता